नोभेम्बर 28, 2018 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	9 Comments उपचार, ग्याष्ट्रिक, डा. राम बहादुर बोहरा
ग्याष्ट्रिकको उपचार औषधि होइन खानपिनमा ध्यान दिनुहोस निको भइहाल्छ ।
मलाई ग्याष्टिक भएको छ भन्ने भ्रमलाई त्याग्नु होस र खानपानमा सुधार गर्नुहोस् मेरो अभिप्राय यो हो की ग्याष्टिक अल्सर भए नभएको जानकारी डाक्टरबाट प्राप्त गर्नुहोस् र एकैपटक धेरै खाना नखाएर पटक-पटक खाने गर्नुहोस् । सकेसम्म झोलिलो पदार्थको सेवन बढी गर्नुहोस् ।
ग्याष्ट्रिकको सजिलो औषधि पहिले यसरी सुरु गर्नुहोस् । राती तामाको भाडामा पानी राख्नुहोस प्रातकालमा उठ्ने वित्तिकै कम्तीमा ४ ग्लास पानी पिउनुहोस र दुई घण्टासम्म केहि नखानुहोस । दुई घण्टापछि एक ग्लास मनतातो पानीमा विरेनुन थोरै राखेर खानुहोस र अन्य खाना पेटलाई पुरा नभोरी खान थाल्नुहोस । थोरै खाँदा पनि पेट दुख्छ भने पनि खान नछोड्नुहोस क्रमश: यो रोग निको हुदै जान थाल्दछ ।
खाना खाँदा गफ नगर्नुहोस, सकेसम्म पानी बढी नपिउनु होस, टिभी हेरेर खाने बानी छ भने त्याग्नुहोस । मरमसला भन्दा पनि चिल्लो पदार्थको सेवन कम गर्नुहोस् । ग्याष्ट्रिकको जड भनेको कब्जियत हो पेट सफा हुने खालको खाना खानुहोस । कामले यो रोग चाडो निको हुन्छ दैनिक हल्का व्याम गर्नहोस् ।
ग्याष्ट्रिको घरेलु औषधि
ज्वानो, बिरेनुन र मिश्री मिलाएर थोरै थोरै नित्य चपाउनुहोस लाखौ रुपैयाँको बचत यसले गराउनेछ ।
← शास्त्र अनुसार यी जीवहरु घरमा पसे अनिष्ट
रोग निको गराउनु छ भने सोच बदलौं →
9 thoughts on “ग्याष्ट्रिकको घरेलु उपचार”
Pingback:जान्नुहोस् र यसरी गर्नुहोस् ! भोजन व्यवस्थापनद्वारा ग्याष्ट्रिकको उपचार